Kwiminyaka yakutshanje, phantsi kwemeko entsha yophuhliso oluqhubekayo lwamashishini amayeza kunye nokukhawulezisa utshintsho kwezobuchwephesha, ngakumbi nangakumbi iinkampani zezixhobo zamayeza zikhula ngamandla kwicala "elingenamntu, elingenabuntu, kwaye elinengqiqo". Phakathi kwabo, imeko ekrelekrele ngokukodwa inokuba sisikhokelo esibalulekileyo sophuhliso lweenkampani zezixhobo zamayeza ixesha elide kwixa elizayo.
Umzi mveliso wezixhobo zamayeza wenza imitsi emikhulu ngokubhekisele kubukrelekrele obanzi
Abangaphakathi bathi kwixesha elizayo, icandelo lamashishini ezixhobo zamayeza liya kuba krelekrele ngokupheleleyo, kubandakanya ubukrelekrele bemveliso, ubukrelekrele bemveliso, ubukrelekrele beenkonzo, ubukrelekrele kulawulo, kunye nobukrelekrele bobomi. Ngapha koko, iyinyani. Okwangoku, iinkampani ezininzi sele zisendleleni yophando lweemveliso ezikrelekrele kunye nophuhliso.
Umzekelo, inkampani yoomatshini bokwenza amayeza itshintshe ngabom ukugxila kweemveliso zezixhobo zayo ukusuka kwisemi-esizenzekelayo ukuya kokuzenzekelayo, ukusukela kokuzenzekelayo ukuya ekwaziseni, ekunxibelelaneni, nasekunyukeleni kubukrelekrele obuyinxalenye, ngaloo ndlela kuphuhliswa iintlobo ngeentlobo zezixhobo zamayeza aseTshayina ezikrelekrele. Ukongeza, uphando ngezixhobo ezikrelekrele lukwasekwe kwiimfuno zabathengi. Ngokusekwe kubukrelekrele, inokunciphisa ukusebenza kunye nexesha lokusebenza, kwaye kwangaxeshanye yomeleze umgangatho wokupakisha izixhobo kunye neemfuno zolawulo lwe-GMP, ngaloo ndlela kukhuthazwa ngakumbi amayeza emveli amaTshayina. Uphuhliso olunengqondo lweshishini kunye nezixhobo zoxubo mayeza.
Kukwakho neenkampani zoomatshini abenza amayeza ezithi ziqwalasele ngokupheleleyo ukuhambelana kwezixhobo phakathi kweenkqubo, kwaye zinokuyila ngokobungakanani bemveliso kunye nefomathi yomsebenzisi, ukuze amandla emveliso enkqubo yonke abe nokuqwalaselwa ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuqhubeka nokuzinza kwemveliso. Inkqubo yedatha inokugcinwa, iqokelelwe, ize iprintwe ngokwahlukeneyo ngenkqubo yolawulo lwekhompyuter yolawulo lweekhompyuter, kunye nokuseta ipharamitha kunye nokubeka iliso kwizixhobo ezininzi kunokulawulwa kwindawo esembindini, kwaye imeko yokusebenza, idatha yeenkcukacha-manani, kunye nesiphene sokuziqonda ibonakaliswe ngexesha lokwenyani, isenza ukuba inkqubo izisebenzele ngokupheleleyo, ikrelekrele, ukuqinisekisa ngcono uzinzo lwenkqubo.
Ukongeza, ngokuqhubela phambili okuqhubekayo kwemizi-mveliso ekrelekrele kunye noomatshini kwilizwe lethu kwishishini lokuvelisa amayeza, isikali samacandelo abalulekileyo kunye nezixhobo zezixhobo ezinje ngezinciphisi nazo ziyanda. Kuxelwe ukuba kukho abavelisi bokunciphisa abadibanisa izibonelelo zamaqonga ahlukeneyo, ukwakha uthotho lwemveliso epheleleyo, kwaye ngokuqhubekayo bahlaziya ubume bemveliso, bahambelane nenkqubela phambili yophuhliso lokudibana kwamashishini kunye nezinto ezintsha ezihlanganisiweyo, ukuphucula ukusebenza kwemveliso, kunye nokubonelela ngokhuseleko, ukhuseleko , kunye nokhuseleko kuzo zonke iintlobo zezixhobo. Ukuhanjiswa kwamandla kunye nokulawulwa kwezisombululo ezichanekileyo.
Umzi mveliso we-Smart uye waba yindawo eshushu kulwakhiwo olutsha lweshishini
Okwangoku, ukongeza ekusetyenzisweni kwetekhnoloji ekrelekrele kwizixhobo nakwizinto, iinkampani ezinamandla kunye nezicwangciso ezijolise phambili kwicandelo lezixhobo zamayeza sele ziqalisile ukuhambisa "iifektri ezikrelekrele". Umzekelo, inkampani yezixhobo ezenza amayeza iye yenza imeko ye-intelligence, oko kukuthi, iimveliso ezikrelekrele kunye nemveliso yemveliso ekrelekrele. Ngoku gqolo ukuphucula umgangatho okrelekrele kunye namazwe aphesheya kwezixhobo zamayeza zase China.
Ukongeza, kwi-58th yoQeqesho loMatshini woNyango, ezinye iinkampani ziye zenziwa udliwanondlebe ne-Pharmaceutical Network ngokubaluleka kokwakha umzi-mveliso ocacileyo, umxholo wokulandeleka, kunye nezicwangciso zophuhliso zexesha elizayo. Umntu ophetheyo kulo mboniso ukwathe, “Ngokombono omkhulu, siyathemba ukuba iifektri ezikrelekrele kuyo yonke indawo zisebenzisa umgangatho ngaxeshanye, kwaye iindibano zocweyo zingasebenza phantsi kwenkqubo engqongqo yoxubo mayeza. Ukongeza, izixhobo zethu zihambelana njani nenkqubo yeparameter esiyifunayo? Ukuqinisekisa ukuba kukhuselekile ukusebenza, kufuneka iqatshelwe ngokufakwa kwikhompyuter nangobuchwephesha bokuhlaziya izixhobo. ”
Ukongeza, umzi-mveliso wokuqala wasekhaya kwishishini lezixhobo zamayeza kulindeleke ukuba wamkelwe ukuphela kwalo nyaka. Kuxelwe ukuba emva kokuba iprojekthi igqityiwe, inkampani iya kuba nemveliso eguqukayo yezixhobo zeerobhothi ezinje ngeerobhothi zokuhlola, ukugcwalisa iirobhothi, kunye neerobhothi zokudlulisa ezingenazintsholongwane. Umzi mveliso we-Smart onelayini yemveliso kunye nezixhobo ezenzelwe wena zamayeza. Ukusetyenziswa kweerobhothi ukuvelisa iirobhothi kunye nokwakha umzi-mveliso wamachiza okrelekrele yindlela entsha yenkampani yokuvelisa okrelekrele kwishishini lezixhobo zamayeza ixesha le-4.0.
Ngapha koko, kule minyaka idlulileyo, ukwaziswa kuthotho lwemigaqo-nkqubo yokuvelisa ekrelekrele kunye neendlela zokunyusa ezinxulumene noko zihlala zizisa amatyeli amatsha kwimveliso nakubomi babantu, kwaye oku kuyinyani nakwimveliso yoomatshini abaxuba amayeza. Kwixesha elizayo, ngophuhliso oluqhubekayo lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, ubukrelekrele buya kudityaniswa ngokunzulu ngakumbi kumzi-mveliso woomatshini abenza amayeza ukubonelela ngoncedo olukhulu kuphuhliso lwamashishini amayeza.